एकाविहानै नयाँ बानेश्वरमा गाडीको ठक्करबाट डा. प्रभु जोशीको मृत्यु - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ एकाविहानै नयाँ बानेश्वरमा गाडीको ठक्करबाट डा. प्रभु जोशीको मृत्यु
एकाविहानै नयाँ बानेश्वरमा गाडीको ठक्करबाट डा. प्रभु जोशीको मृत्यु
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ मंसीर ८ गते, १०:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं—नयाँ बानेश्वरमा गाडीको ठक्करबाट आइतबार विहानै एक चिकित्सकले ज्यान गुमाएका छन् । मर्निङ वाकमा निस्किएका एनेस्थेसियाका चिकित्सक डा. प्रभु जोशीले गाडीको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका हुन् ।
झण्डै ७२ वर्षीया जोशी बसुन्धरास्थित इशान हस्पिटलमा कार्यरत छन् । उनी मर्निङ वाकबाट निस्किएका बेला गाडीले विहान ६ बजेतिर संसद भवनको दक्षिण गेटमा ठक्कर दिएको थियो । ठक्कर दिएलगतै गाडी भागेको थियो । नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर सुरेश ठाकुरले गाडीको ठक्करबाट डा. जोशीको मृत्यु भएको पुष्टि गरे ।
डा. जोशीलाई ठक्कर दिएर भागेको गाडीको पत्ता लाग्न सकेको छैन् । प्रहरीले गाडीको खोजी भैरहेको जनाएको छ । ‘हामी घटनाबारे थप बुझ्दैंछौं, अनुसन्धान जारी छ,’ बानेश्वर प्रहरी वृतका डिएसपी दुर्गा रेग्मीले भने, ‘उहाँको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ ।’
डा. जोशी बसुन्धरास्थित इसान चिल्ड्रेन एन्ड वुमन्स अस्पतालमा कार्यरत थिए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. आरपी चौधरीले उक्त दुखद् घटनाले आफूहरुलाई स्तब्ध बनाएको बताए । ‘उहाँ यहाँ हाम्रो अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, एकदमै दुखद् घटना हुन पुग्यो,’ डा. चौधरीले भने । डा. जोशी इशानका शेयरधनी पनि हुन् ।
यसअघि डा. जोशीले कान्ति बाल अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा पनि काम गरेका थिए ।